James Swan oo baaq nabadeed kasoo saaray xaaladda Soomaaliya – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
By Aadan Sooyaal / April 1, 2020 April 1, 2020
Muqdisho-(SONNA)-Ergeyga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, James Swan ayaa sheegay in ay ku celinayaan baaqa xoghayaha guud ee Jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ee ahaa Xabad-joojin caalami ah oo meel la isaga dhigayo rabshadaha, is-aaminaad la’aanta, cadaawadda iyo naceybka, si looga baaqsado dhibaatada cudurka Corona virus.
James Swan, ayaa sheegay in bahda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ay Garab taagan yihiin Shacabka Soomaaliyeed xilliga ay dhibaatadu jirto, ayna sii wadi doonaan taageerada wax looga qabanayo ka hortagga saameynta caafimaad iyo midda dhaqaale ee cudurka COVID-19.
“Waa inaan dhammaanteen u midownaa inaan ka hor tagno faafidda cudurkan. waxaan si gaar ah ugu baahannahay inaan dareen gaar ah ku bixino kuwa ugu baylahda badan ee Bulshadeenna, oo ay ku jiraan barakacayaasha, Dadka xanuunsan iyo Dadka da’da ah,” ayaa lagu yiri qorlaakan.
Qaramada Midoobey ayaa ugu baaqday in Dadka Soomaaliyeed oo dhan in ay isugu yimaadaan dagaalka ka dhanka ah cudur Coronavirus oo Dunida ku haya dhibaato ba’an.